तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु – Samacharpati - A Complete News Portal From Pokhara
Home » Topics » तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु
तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु
प्रकाशित मिति: 2076 जेष्ठ 25 शनिबार(June 8, 2019) 7:09 PM बजे Posted By: Rss Feed
पोखरा न्यूज – २५, जेठ । चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँको भानु नगरपालिकामा शुक्रबार राति एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भानु नगरपालिका–२ भकुण्डोथोक बस्ने ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
आफ्नै घरको आँगनमा खेलिरहेको अवस्थामा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिए । चितुवाले बालिकालाई घरबाटै आक्रमण गरी लगेको र उनको शव घरभन्दा ५०० मिटर पर खरबारीमा फेला परेको थियो । प्रहरीका अनुसार बालिकाको घाँटीमा चितुवाले चिथोरेको डाम छ भने शरीरका अन्य भागमा कुनै क्षति छैन ।
चितुवाको आक्रमणबाट यसअघि भानु नगरपालिकामा दुई बालक र एक बालिकाको मृत्यु भइसकेको छ । । चितुवाको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका उनीहरुलाई यसअघि नै राहतबापतको रु दश लाख प्रदान गरिसकिएको छ । गत माघ महीनामा भानु नगरपालिका–५ चुँदीरम्घा र भानु नगरपालिका–२ शेखाटारमा दुई वटा चितुवा मृतावस्थामा फेला परे पनि पुनः चितुवाले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन् ।
The post तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु appeared first on Pokhara News.
“मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ :
यता छन्, गर्मी मौसममा खानै पर्ने ६
कान रोग केहो ! कानबाट किन पिप आउछ ! यसबाट बाँच्ने उपाय !
परिवारका सबै जना आत्महत्या गर्ने अवस्थामा ! कसरी भयो यस्तो !